Recipes | Great Arakan
ကျော်ဝင်း ခိုင် - October 17, 2018
Recipes ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 29, 2018 0
https://v.pinimg.com/videos/720p/b2/81/e0/b281e060025d5f98106a1024d7d3e85a.mp4 ၁) စတော်ဘယ်ရီ ငပျောသီး အိုက်စ်ကရိမ်း လုပ်ဖို့ အခွံနွှာပနာ၊ ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ ငှက်ပျောသီးမှည့် ၃ လုံး ရခဲတိုက်တာထဲမှာ ခဲအောင် ထည့်ထားရေ စတော်ဘယ်ရီသီး ခွက်ဝက် နို့ ခွက်ဝက် ဗနီလာ ၁ ဇွန်း လုပ်ပုံ - ဖြတ်စက်ထဲမှာ...
Recipes ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 8, 2017 0
ကညွှတ် - ပဇွန် ကျော်ဖို့ လိုအပ်စွာတိ - • သံလွင်ဆီ/ပဲဆီ ၄ ဇွန်း • အခွံခွာဗြီးသား ပဇွန် အလတ်စား ၁ ပေါင် • ၂ လက်မ၊ ၃ လက်မ အရှည် ဖြတ်ထားရေ ကညွှတ် ၁...
ပဇွန်ထမင်းကျော် ကျော်ဖို့ လိုစွာတိ - • ပဲငံပြာရည် အကြိုင် ၃ ဇွန်း • နမ်းဆီ ၁ ဇွန်း • ချင်းစိမ်းမှုန့် ဇွန်းဝက် • ငရုတ်ကောင်း အဖြူမှုန့် ဇွန်းဝက် • သံလွင်ဆီ/ပဲဆီ ၂ ဇွန်း • အခွံခွာဗြီးသား...
ငရုတ်ပွသီး ဇာပိုင် ဖုတ်ဖို့လဲ?
Recipes ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 3, 2017 0
၁) ငရုတ်ပွသီးကို မီး မပြင်းတပြင်း ဖွင့်ထားရေ ဂစ် မဖိုထက်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ မသွီး မဖိုထက်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ညှပ်နန့် ကိုင်တင်ပနာ ဖုတ်နိုင်ပါရေ။ ၂) အပြင် အရီခွံတိ သျှစ်လာစွာနန့် ငရုတ်ပွသီးကို တစိချေဇီ လှည့်ပီးပနာ အရီခွံတိ အားလုံး မဲလားအောင်ထိ ဖုတ်လိုက်ပါ။ ၃)...
ကြက်ဥ ဇာပိုင် ကျော်ဖို့လဲ?
"အမိယေ ... ကြက်ဥ ကျော်စွာများ အလကား အပင်ပန်းခံပနာ ရွီးနိန်ရေ။" လို့ ထင်ပါလိမ့်မေ။ ဟုတ်ပါရေ။ ကြက်ဥကို စနစ်တကျ မကျော်တတ်တေ လူတိ အများကြီး ရှိလို့ပါ။ ကိုယ့်စွာကို တတ်တေလို့ ထင်စွာတောင် စနစ်ကျယင့်လား တခေါက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၁) အိုးမကပ်တေ ကျော်ဗျကို...